Fandrahonana goavana - Ny Martsa Manerantany
Home » fanangonam-bola
Ity tetikasa ity dia miantoka afa-tsy amin'ny fanomezana avy amin'ireo mpikatroka sy mpiara-miasa aminy. Ny mpikambana tsirairay avy ao amin'ny Base Team dia mahazo vola amin'ny dian'izy ireo. Miara-miasa amin'ny fandaniana amin'ny trano, fikojakojana sy fitaterana eny an-dalana. Misy soso-kevitra izany ekipa mpanohana Avy amin'ny toerana tsirairay izy ireo dia afaka miara-miasa amin'ny ampahany amin'ny trano sy ny fandaniana.
Ny tanjona dia ezahana satria ny Baikan'ny Base dia maniry ny hivezivezy manodidina ny firenena 100 avy amin'ny kontinanta rehetra. Saingy ny ekipan'ny Base dia tsy miankina ara-toekarena amin'ny orinasa, governemanta na vondron'olona, ​​mba tsy hanohanana ny toerana na ny postila.
Mba hihazonana izany fahaleovantena izany, mangataka ny fanampianareo izahay, miara-miasa amin'io hetsika io izay ampitomboina amin'ny fanohanana vaovao araka ny fantatra.
Hanao izay azontsika atao mifanaraka amin'ny fanohanana ananantsika isika. Hatramin'izay dia ho tonga isika.
Ka miasa ao amin'ny Martsa Manerantany ary mifanohitra amin'izay rehetra mety ho azontsika.
Tamin'izany izahay dia nanamarina fa rehefa mifandray amin'ny antony tsara isika dia lasa fitaomam-panahy sy fiaraha-miasa bebe kokoa.
Izy io dia mandray anjara amin'ny fanomezana kilometatra amin'ny làlan'ny Martsa Manerantany.
Manome km 10 amin'ny mandeha amin'ny 10 euros.
izany dia hampiditra ny anaranao ao amin'ny tranonkala ary hanome antsika ny fahafahana mandeha lavitra kilometatra fanampiny.
Manome km 50 amin'ny mandeha amin'ny 50 euros.
Hanolotra anao izahay fampirimana fanentanana fanentanana, miaraka amin'ireo singa amin'ny diabe mba hampisehoana ny fihetseham-ponao amin'ireo izay akaiky anao indrindra.
Ankoatra izany, dia ahitanao ny valisoa rehetra momba ny ambaratongan'ny dingana 15.000 ary hanome antsika bebe kokoa ny fahafahana mandeha lavitra kilometatra fanampiny.
Manome km 100 amin'ny mandeha amin'ny 100 euros.
Amin'ity ambaratonga ity dia hiseho ny anaranao, tsy ao amin'ny tranonkala ihany, fa koa koa ao amin'ny fizarana misaotra manokana ao amin'ny bokin'ny Diaben'ny Andro Erantany 2ª.
Ankoatra izany, dia hampiditra ny tombontsoa rehetra avy amin'ny dingana 75.000 ianao, ary ny fahafahana mandeha amin'ny dia tsara noho ny fiaraha-miasa
Manome km 175 amin'ny mandeha amin'ny 175 euros.
Amin'ity dingana ity Hanome anao boky ofisialin'ny Diaben'ny Andro Eran-tany 2ª izay manolo-tena anao amin'ny fankasitrahana ny ekipan'ny Base ary ao anatin'izany ianao no hiseho amin'ny fizarana misaotra manokana.
Ankoatra izany, dia hampiditra ny tombontsoa rehetra avy amin'ny dingana 150.000 sy ny teo aloha.
Manome km 225 amin'ny mandeha amin'ny 225 euros.
Amin'io ambaratonga io dia hanome anao fanampiana fanampiny izahay pirinty tsara amin'ny boky ofisialin'ny Diabe farany Amerikana Afovoany.
Ankoatr'izany, tsy maintsy ampiantsika, ny valisoa rehetra amin'ny ambaratonga 262.000 sy ny teo aloha!
Manome km 300 amin'ny mandeha amin'ny 300 euros.
Amin'ity sehatra ity dia hampanofa anareo amin'ny alàlan'ireo valisoa hafa avy amin'ny ambaratonga 337.500 sy ny teo aloha Volana mahafinaritra ny Diabe Amerikana Atsimo velona taona vitsy lasa izay.
Manome km 500 amin'ny mandeha amin'ny 500 euros.
Hahazo ny boky rehetra navoaka hatramin'ny datin'ny Martsa, anisan'izany ny boky voalohany sy voalohany amin'ny March 1ª ary jereo ny fandrosoana amin'ny taona 10 farany.
Aorian'io sehatra io dia hahazo ny valisoa rehetra avy amin'ny dingana 450.000 sy ny teo aloha ianao.
Manome km 1.000 amin'ny mandeha amin'ny 1.000 euros.
Amin'io sehatra io dia omena anareo ny valisoa rehetra azo atao, ny fanangonana boky manontolo, ny fanamarihana ao amin'ny boky sy ny tranonkala.
Ary koa ho mariky ny fankasitrahana fanampiny izahay dia hampanatitra anao Sary mihaja mahatalanjona amin'ny 65 x 95 cm miaraka amin'ny antsipiriany rehetra momba ny fomba fandrosoana nahomby ity March 2ª World ity.
Misaotra an'ireo mpandoa hetra aminay